WINDOWS 8.1 ကို INSTALL လုပ်ခြင်း - WINDOWS ကို - 2019
ဒီလက်စွဲမှာတော့ Windows 8.1 ကိုတပ်ဆင်သူအပေါင်းတို့ကိုအဆင့်ဆင့်ကွန်ပျူတာသို့မဟုတ် laptop အပေါ်ဆွေးနွေးတင်ပြပါလိမ့်မယ်။ မေးခွန်းက Windows 8.1 သည် Windows 8 ကနေအဆင့်မြှင့်အကြောင်းကို, install ရုံအကြောင်းမစင်ကြယ်ဖြစ်လိမ့်မည်။
Windows 8.1 ကို install လုပ်ဖို့, သင်စနစ်, ဒါမှမဟုတ် OS နဲ့အနည်းဆုံးက ISO image ကိုနှင့်အတူစနစ်သို့မဟုတ် bootable flash drive ကိုနှင့်အတူမောင်းဖို့လိုအပ်ပါလိမ့်မယ်။
သငျသညျပြီးသား Windows 8 လိုင်စင် (ဥပမာအဘို့, laptop ကိုအပေါ်ကို pre-installed ထားပြီး) နှင့်သင်ကခြစ်ရာကနေ Windows 8.1 ကိုလိုင်စင် install လုပ်ချင်လျှင်, သင်အောက်ပါပစ္စည်းများလိုအပ်နိုင်ပါသည်:
အဘယ်မှာရှိသည် Windows 8.1 ကို download (ထို update ကိုအကြောင်းကိုအစိတ်အပိုင်းပြီးနောက်)
Windows ကိုကနေ Windows 8.1 ကိုလိုင်စင် key ကို download လုပ်ပါဖို့ဘယ်လို 8
သင်ဘယ်လို windows 8 ၏သော့ကိုသိနှင့် 8.1 ပါဘူး
ကျနော့်အမြင်၌ငါ installation လုပ်ငန်းစဉ်ကိုစဉ်အတွင်းသက်ဆိုင်ရာဖြစ်မည်အကြောင်းအားလုံးစာရင်းကောက်ယူ။ သငျသညျရုတ်တရက်ဆိုနောက်ထပ်မေးခွန်းများရှိပါကမှတ်ချက်များအတွက်မေးကြည့်ပါ။
လက်ပ်တော့သို့မဟုတ် PC ပေါ်မှာ Windows 8.1 ကို install လုပ်နည်း - အဆင့်ညွှန်ကြားချက်အားဖြင့်အဆင့်
ကွန်ပျူတာရဲ့ BIOS ကိုခုနှစ်တွင်တပ်ဆင် drive ကို reboot လုပ်ရာမှ boot မှသတ်မှတ်ထားသည်။ အနက်ရောင်မျက်နှာပြင်တွင်, သငျသညျဆိုသောစကားကို "စာနယ်ဇင်း CD ကိုသို့မဟုတ် DVD မှ boot မဆို key ကို" စာနယ်ဇင်းကပေါ်ထွန်းတော်မူသောအခါမည်သည့် Key ကိုမြင်လျက်တပ်ဆင်ရန်ပြင်ဆင်နေ၏လုပ်ငန်းစဉ်၏ပြီးစီးဘို့စောင့်ပါ။
လာမယ့်ခြေလှမ်းအတွက်သင်ရွေးချယ်ခြင်းနှင့် install စနစ်ဘာသာစကားနှင့် "Next ကို" ခလုတ်ကိုကလစ်နှိပ်ပါဖို့လိုအပ်ပါတယ်။
နောက်တစ်နေ့အရာကိုသင်မြင်ရပါလိမ့်မည် - က window ၏အလယ်ခလုတ်ကို "Install" ဖြစ်တယ်, ဒါကြောင့် Windows 8.1 ကို install လုပ်ပါဆက်လက်ဖိအားပေးရမည်ဖြစ်သည်။ ငါတပ်ဆင်ခကာလအတွင်းက Windows 8.1 ကို Key ကိုဖယ်ရှားဒီလက်စွဲစာအုပ်ဖြန့်ဖြူးတောင်းဆိုချက်အတွက်အသုံးပြုသောအဖြစ် (ဒီကြောင့်လိုင်စင် key ကိုအရင်ဗားရှင်းကနေမသင့်တော်ကြောင်းဆိုတဲ့အချက်ကို ယူ. စေခြင်းငှါ, ငါအပေါ်က link ကိုအပ်ပေးတော်မူ၏) ။ သငျသညျအဓိကတောင်းဆိုရန်နှင့်ထိုသို့မှန်လျှင် - ရိုက်ထည့်ပါ။
သင်တပ်ဆင်ခနှင့်အတူဆက်လက်ချင်လျှင်, အသင်သည်ထိုသူတို့နှင့်အတူသဘောတူမည်, လိုင်စင်သဘောတူညီချက်ဖတ်ရန်နှင့်။
ထိုအခါတပ်ဆင်ခအမျိုးအစားကိုရွေးချယ်ပါ။ ဒီ option ကိုပိုမိုနှစ်သက်ကြောင့်ဒီလမ်းညွှန်အသစ်ကမှယခင်လည်ပတ်မှုစနစ်၏ပြဿနာများ၏အပြောင်းအရွှေ့ရှောင်ရှား, Windows 8.1 စင်ကြယ်တပ်ဆင်တှငျဖျောပွထားလိမ့်မည်။ "မိမိစိတ်ကြိုက်တပ်ဆင်။ " ကိုရွေးချယ်ပါ
နောက်တစ်နေ့ခြေလှမ်း - disk နဲ့ install လုပ်ဖို့ partition ကို၏ရွေးချယ်မှုဖြစ်သည်။ သင်ကပိုပြီးဖြစ်စေခြင်းငှါ, သင်တို့ကိုငါမသိရပါဘူးသောရည်ရွယ်ချက်ထိုကဏ္ဍများကိုဖယ်ရှားပစ်ရန်အကြံပြုကြဘူးတစျခုကို 100 MB မှဝန်ဆောင်မှုနဲ့ Windows7ကို run သောစနစ်တစ်ခု - အထက်ပါပုံတွင်သင်သည်နှစ်ခုကဏ္ဍများကိုတွေ့နိုင်ပါသည်။ အထက်တွင်ပြကိစ္စတွင်ခုနှစ်, options နှစ်ခုရှိပါတယ်ဖြစ်နိုင်သည်:
သင်က system ကို partition တစ်ခုကိုရွေးချယ်ပါနဲ့ click နှိပ်နိုင်ပါတယ် "Next ကို။ " ဤကိစ္စတွင်ခုနှစ်, Windows7ဖိုင်များကိုမဆိုဒေတာဖျက်ပစ်မည်မဟုတ်ပါ, တစ်ဦး Windows.old ဖိုင်တွဲသို့ပြောင်းရွှေ့နေကြသည်။
စနစ်က partition တစ်ခုကိုရွေးချယ်ပါ, ပြီးတော့ "Format ကို" ကိုနှိပ်ပါ - ထို့နောက်အားလုံး data တွေကိုဖျက်ပစ်ပါလိမ့်မည်, နဲ့ Windows 8.1 တစ်ဦးအလွတ် disc ကိုပေါ်ကို install လုပ်ပြီးသားဖြစ်ပါတယ်။
ငါဒုတိယ option ကိုအကြံပြုနှင့်သက်ဆိုင်ရာအချက်အလက်များ၏ထိန်းသိမ်းစောင့်ရှောက်ကြိုတင်ဂရုစိုက်သင့်ပါတယ်။
"Next" အပိုင်းများနှင့်ကလစ် နှိပ်. ရွေးချယ်ခြင်းပြီးနောက်ကျနော်တို့က OS ကို install လုပ်ပြီးသည်အထိအချိန်တစ်အချို့သောကာလအတွက်စောင့်ဆိုင်းရန်ရှိသည်။ အခါကွန်ပျူတာသည် Restart, ကိုလက်စသတ်: ဖြစ်နိုင်ရင်ချက်ချင်းစနစ် hard disk ထဲက boot ဖို့ BIOS ကိုသတ်မှတ်ထားပြန်ဖွင့်သည့်အခါ။ သင်ပြုဖို့အချိန်မရှိဘူးဆိုရင်မက်ဆေ့ခ်ျကိုမြင်သောအခါ, ပဲ "CD ကိုသို့မဟုတ် DVD မှ boot မဆို key ကိုစာနယ်ဇင်း" ဘာမှနှိပ်ကြဘူး။
တပ်ဆင်ပြန်လည် reboot လုပ်ပြီးနောက်ဆက်လက်ပါလိမ့်မယ်။ ပထမဦးဆုံးအသငျသညျ (သင်အစောပိုင်းကကြောင့်ထဲသို့ဝင်ဘူးလျှင်) တစ်ဦး product key ကိုရိုက်ထည့်ဖို့တောင်းနေကြသည်။ ဒီနေရာတွင်နေဆဲအဆုံးမှာရပါလိမ့်မယ် "Skip" ကိုကလစ်နှိပ်ပါ, သင်မူကားက Windows 8.1 ကိုသက်ဝင်နိုင်သောစိတ်တွင်ထိန်းသိမ်းထားနိုင်သည်။
နောက်တစ်နေ့ဇာတ်စင် - အရောင်အစီအစဉ်ကိုရှေးခယျြနှင့်ကွန်ပျူတာ၏အမည်ကိုသတ်မှတ် (သင်စသည်တို့ကိုကွန်ယက်, သင့်ရဲ့အကောင့်ကိုတိုက်ရိုက် ID ကိုမှကွန်ပျူတာချိတ်ဆက်တဲ့အခါဥပမာ, ကိုအသုံးပြုပါလိမ့်မည်)
လာမယ့်မျက်နှာပြင်တွင်သင်သည် Windows 8.1 ကို default settings ကို install လုပ်သတိပေးခံရနေကြတယ်, ဒါမှမဟုတ်အခြားသူတို့ရဲ့ကိုယ်ပိုင်အပေါ်သူတို့ကိုခန့်ထား၏။ ဒါဟာသင်မှတက်သည်။ ကိုယ်တိုင်ကိုယ်ကျ, ငါသည်များသောအားဖြင့်ကို default စွန့်ခွာလျက်, OS ကို install လုပ်ထားမှသာအပြီး, သင့်ဆန္ဒကိုအညီ configure ။
နောက်ဆုံးကျနော်တို့လုပ်ဖို့ရှိသည် - ဒေသခံတစ်ဦးအကောင့်ဖို့ user name နဲ့ password ကို (optional) ရိုက်ထည့်ရန်။ ကွန်ပျူတာအင်တာနက်ကိုချိတ်ဆက်လျှင်ပုံမှန်အားဖြင့်သင်ကအကောင့်တစ်ခု Microsoft ကတိုက်ရိုက် ID ကိုဖန်တီးဖို့သတိပေးခံရသို့မဟုတ် data ကိုရိုက်ထည့်ပါလိမ့်မည်ရှိထားပြီးသား - အီးမေးလ်လိပ်စာနှင့်စကားဝှက်ကို။
အထက်ပါအပေါငျးတို့သပြုပြီးနောက်, တကနည်းနည်းစောင့်ဆိုင်းရန်ဖြစ်တယ်, တိုတောင်းတဲ့အချိန်ပြီးနောက်သင်က Windows 8.1 ၏ကနဦးမျက်နှာပြင်ကိုတွေ့မြင်သဖြင့်, အလုပ်၏အစအဦးမှာပါလိမ့်မယ် - အချို့သောအကြံပေးချက်များကိုသင်လျင်မြန်စွာကျွမ်းကျင်ကူညီဖို့ရန်။
ဗီဒီယို Watch: How to Install Myanmar Font in Windows7: Tech Niche (အောက်တိုဘာလ 2019).